“Haddii ay jiraan kuwo aan maantey afurin, waxaan ku tilmaami karaa asaagaa Alle kaa reeb” M/weyne Faroole. – Radio Daljir
“Haddii ay jiraan kuwo aan maantey afurin, waxaan ku tilmaami karaa asaagaa Alle kaa reeb” M/weyne Faroole.
Agoosto 30, 2011 12:00 b 0
Garowe, Aug 30 – Madaxweynaha dawladda Puntland Dr C/raxmaan Shiikh Maxamed Maxamuud Faroolle ayaa khudbad-dheer maantey ka jeediyay garoonka kubadda cagta magaalada Garowe ee Mira-awaare halkaasi oo kumanaan dadweyne ah m/weynuhu la tukaday saalaaddii ciidda.
M/weynaha oo saaladda kaddib halkaasi ka hadlay ayaa khudbadiisa uu ku iftiimiyay arrimo dhawr oo ay ka mid tahay ammaan guud ee Puntland, heshiiska cusub ee Puntland iyo federaalka, khilaafaadka ciidda iyo arrimo kale oo badan.
Madaxwne Faroole ayaa dhanka kale ka hadley dilalka inta badan lala xiriiriyo iney salka ku hayaan mawqif diineed, waxaana arrimaasi madaxweynu si cad uu ugu tilmaamey inay tahay arrimo siyaasadeed.
Madaxneynaha dawladda Puntland Dr. C/raxmaan ayaa dardaaran xooggan u jeediyay shacabka ku dhaqan Puntland doorkooda ku aadan sugida ammniga.
Inkastoo madaxweynuhu khudbadiisa uu ku iftiimiyay arrimo dhawr ah, haddanae waxaa uu amaan iyo boogaadin usoo jeediyay ciidanka ammaanka Puntland, oo uu ku amaaney iney yihiin kuwa markasta naftooda u hura maslaxada dalkooda.
Madaxweynaha ayaa gabagabada khudbadiisa waxaa uu Alle u baryay ummada Soomaaliyeed iyadoo kummanaan dadweyne oo ku sugnaa Garoonka kubada cagtana ay aamiinta u jiibinayeen.
Khudbada madaxweynaha dawladda Puntland ayaa kusoo aadaysa xilli markii ugu horreysey si isku mid ah ay munaasabada ciidda habeenimadii xaley aheyd ugu dhawaaqeen Reysal-wasaaraha DFKS iyo Madaxweynaha dawladda Puntland taas oo muujineysa isku xirnaanta Puntland iyo dawlada dhexe.
Maxamed C/laahi Cali (kooshin)